Iincwadi zikaEmilia Pardo Bazán, iculo kwindalo kunye nobufazi. | Uncwadi lwangoku
Iincwadi zikaEmilia Pardo Bazán: Indalo kaMama
"U-Emilia Pardo Bazán Libros" lolunye lolona khangelo luqhelekileyo kwiwebhu kwiinyanga ezidlulileyo. Izizathu zininzi, kodwa ubuncwane obumele umsebenzi wombhali wokubhala ugqamile phakathi kwabo bonke. UBazán wayengumlobi weendaba waseSpain, umbhali, umfazi, umguquleli kunye nomhleli. Kubo bonke ubomi bakhe wayekhusela amalungelo abasetyhini kwaye waqinisekisa ukuba banendima ehlonelwayo eluntwini.
Umbhali wayeyinxalenye yezidwangube kunye neRoyal Galician Academy. Isihloko sakhe sokuBala uPardo Bazán wawongwa nguKumkani Alfonso XIII ngoJuni ka-1908. IBazán yavelisa iinoveli nezincoko, iincwadi zokuhamba nemidlalo. Amabinzana adumileyo ombhali nawo ayabonakala, ejolise ekuzikhuseleni kwabasetyhini kwaye igcwele ubuncwane obunqabileyo befilosofi kunye nobunkondlo.
1 Usapho kunye nobuntwana
3 Ubomi bothando
4 Ukuqala kobomi bakhe boncwadi
5 Ubume bendalo bukaPardo
6 Ezopolitiko kunye nobufazi
7 Iminyaka yokugqibela kunye nokufa
8 U-Emilia Pardo Bazán: Iincwadi ezikhoyo kunye neeNkcazo
8.2 Umbuzo ovuthayo
8.3 Uhlobo lomama
Usapho kunye nobuntwana
UPardo wazalelwa eLa Coruña, idolophu eseGalicia, ngoSeptemba 16, 1851. Wakhulela kwintsapho yeengcungcu. Uyise wayenguJosé María Pardo Bazán y Mosquera, owayenesihloko sokuqala sokubala uPardo Bazán kunye nonina ogama linguAmalia María de la Rúa Figueroa y Somoza.
Utata wakhe wayeyindoda eneengcinga zobufazi kwaye waqinisekisa ukuba uEmilia wayenemfundo esemgangathweni. Ebuntwaneni bakhe wayedla ngokufunda iincwadi awayenazo utata wakhe, awayezithanda ziincwadi zamabali kunye nezembali. Wafunda kwisikolo esikhuselwe yiRoyal House nanjengoko wayekwishumi elivisayo.
Umbhali wayengomnye wabafazi abambalwa bexesha lakhe ababengavumi ukufunda ngomsebenzi wasekhaya kunye nomculo.. Wafunda isiNgesi, isiFrentshi kunye nesiJamani, utata wakhe kunye nabahlobo bakhe abanengqondo bamfundisa kwisayensi nakwifilosofi ngenxa yokuba izifundo zaseyunivesithi zazingavunyelwanga kubantu ababhinqileyo.
Ngomnyaka we-1868 watshata nomfundi oneminyaka engama-19 ubudala ogama linguJosé Quiroga y Pérez Deza. Kunyaka emva komtshato bagqiba kwelokuba bafudukele eMadrid kunye notata kaEmilia, owayezosebenza isikhundla sakhe njengeSekela likaCortes. Ngo-1871 bahamba nePardo-Rúa baya e-Itali naseFrance.
Kwidayari Ukungakhethi buso Ukhuphe imibhalo yakhe kuhambo awayelwenzile nabazali bakhe kunye nomyeni wakhe. Kule miba umbhali wayefuna ukubonisa indlela ezona ndlela zibalaseleyo zokukhuthaza imfundo emntwini. Ucebise ngokutyelela iindawo ezintsha ubuncinci kube kanye ngonyaka.
Ngo-1876 wapapasha isincoko sakhe sokuqala esinesihloko esithi Isifundo esibalulekileyo semisebenzi kaBawo Feijoo awathi ngayo wafumana ukuqatshelwa nokunconywa. Kwakuloo nyaka unyana wakhe uJaime wazalwa kwaye wavelisa ingqokelela yemibongo eyahlelwa nguFrancisco Giner de los Ríos enesihloko esinegama elifanayo nelincinci.
Caphula ngo Emila Pardo Bazán - Frasesgo.com.
Ngo-1879 intombi yakhe uBlanca wazalwa kwaye wapapasha inoveli yakhe yokuqala U-Pascual López, umlando wobomi bomfundi wezonyango. Lo yayingumsebenzi ophumeleleyo owawutyhilwe e ISpain Magazine. Ibali lenzeke eSantiago de Compostela kwaye umxholo wayo wawuthandana nethoni eyiyo.
Emilia esidlangalaleni Ikhefu lomtshato kwi1881, kulo msebenzi wazisa umdla wakhe kwindalo. Kwakuloo nyaka intombi yakhe uCarmen yazalwa kwaye yaqala ukunxibelelana nombhali kunye nezopolitiko uBenito Pérez. Ngo-1882 wafuna imfundo kubafazi baseSpain kwisemina yeZiko leMfundo lamahala.
Ubume bendalo bukaPardo
Umbhali waseSpain yapapashwa ngo-1882 Umbuzo ovuthayo, incwadi ethathelwa ingqalelo njengomkhuthazi wendalo kwilizwe lakhe. Yayingumsebenzi ophikisanayo, owaziwa njengongakholelwayo kubukho bukaThixo kunye namanyala kuba wawumalunga noncwadi luka-ilemile Zola. Ngenxa yale mpikiswano, umyeni wakhe wamcela ukuba angahlali nokubhala.
UPardo-Bazán uqhubeke ngokuvelisa imisebenzi, kubandakanya Inkundla ngo-1883 no Intombazana encinci Kwi-1885, le yokugqibela yaphefumlelwa ziingxaki zomtshato kunye nokwahlukana okwalandelayo nomyeni wakhe uJosé. Ngo-1886 wapapasha I-pazos de Ulloa, kwaye ngo-1887 umbhali wapapasha Uhlobo lomama Waqala ukushenxa kwindalo.
Ezopolitiko kunye nobufazi
Ubuntatheli bezopolitiko kunye nomlo wakhe wokukhusela amalungelo abasetyhini wamnika ukubonwa okukhulu. Wayethetha ngezihlandlo ezahlukeneyo kwaye amadoda amaninzi elo xesha ayeziva esongelwa ziitalente zakhe. Ngo-1890 wapapasha Umfazi waseSpain kwaye wafunda ngokusweleka kukayise. Le lahleko yazisa uEmilia kufutshane nesimboli kunye nokomoya.
Ngelifa likayise, wadala iphephancwadi lezopolitiko nezentlalo Ithiyetha eNtsha eCritical. Ngomnyaka we-1892 wenqatshelwe xa ezama ukuba yinxalenye yeRoyal Spanish Academy kwaye ngo-1906 waba ngumfazi wokuqala ukuba aphathe isebe leencwadi kwiziko lezenkcubeko lase-Atenea de Madrid. Kuthiwa ukuba ngaxa lithile ebomini bakhe umbhali wayenezimvo zobuhlanga nezichasene namaSemite.
Ngomnyaka we-1916 wakwazi ukufundisa iiklasi ze-Neo-Latin, waba nguprofesa wokuqala kweso sihlalo kwi-Central University yaseMadrid. U-Emilia wasweleka ngoMeyi 12, 1921 kwikomkhulu laseSpain. Incwadana yakhe yokuqala Ukuzonwabisa okuyingozi kwaye ezinye zeencwadi zakhe zokuhamba zapapashwa emva kokuba efile.
Umbhali uEmilia Pardo Bazán.
U-Emilia Pardo Bazán: Iincwadi ezikhoyo kunye neeNkcazo
Nazi iziqwenga zeminye yemisebenzi yombhali waseSpain:
“Njengokuba ngokufuthi kungekho maxesha amahlwempu, iAmparo yayinxibe isuti efanayo, kodwa yonakala kakhulu, kwaye isikhafu esimbala ubomvu yayikuphela kwengubo eyayibonisa ukutshintsha ukusuka entwasahlobo kuye ebusika ...
“… Ngaphandle kwale mpahla incinci kangaka, andazi ukuba le ntyatyambo yokufikisa yayiqala ukubonakala emntwini wakhe; ulusu lwakhe belukhaphukhaphu kwaye luceketheke, amehlo akhe amnyama ayakhazimla ”.
“Nanjengoko uZola eyibhenca, inengxaki yendalo yeziphene esele sizazi. Eminye yemigaqo yayo ineziphumo ezintle kubugcisa; kodwa kukho kwindalo, ithathwa njengesiqendu semfundiso, umda ...
"… Uhlobo oluvaliweyo nolukhethekileyo endingakwaziyo ukuluchaza ngaphandle kokuba ithi iyafana namagumbi asezantsi anezindlu ezincinci kakhulu, apho kunzima ukuphefumla. Ukuthintela ukuntywila, kufuneka uvule ifestile: vumela umoya ujikeleze kwaye ukukhanya okuvela esibhakabhakeni kungene ”.
“Ababini bazimela phantsi komthi. Yayingumkhuseli obalaseleyo womthi we-chestnut, unesithsaba esihle kwaye sikhulu, esivulekileyo malunga nobungangamsha bokwakha ngaphezulu kwekholamu ebanzi neyomeleleyo yomthi, owawubonakala ngathi uqalisa ngokuzikhukhumeza ngokubhekisele kumafu akhutshiweyo: umthi woosolusapho, uhlobo olubonayo iincukuthu ziphumelele ngokungakhathali., Iincukuthu, iimbovane nemibungu, kwaye zinika indawo yokuhlala nengcwaba kwizono zamaxolo azo aqhekekileyo ”.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Emilia Pardo Bazán: iincwadi ezibalaseleyo kunye nobomi bakhe